Seera Barnoota jijjiiru mirga ummata isaa itti fayadamu qoofa!!!
Ijooleen Minilik siirna barnoota Oromoo nu akeeku mirga hin qabdu.
Warrii Yaada kana kassan warra Ethiopia Diiguf adeemanidha , namoon akkana kun Oromiya keessa yoo jiratan ari'atamu qabu, Afaan Dhaloota kee 1_6 qoofa barata jeechun Minilikin deebisudha. Afaan Amahara kutaa 1 kaafte barata jeechun siirna darbe deebisudha siirna garbuma Habasha deebisudha, maliif akka yaadame nan beeka, Afaan Oromoo Afaan biyoolleessa gochu irra ijooleen Oromoo dirqisfamte akka Afaan Amahara kuta 1 kaafte baratu gochun akka furmatati fudhachu isaanti Warrii Amahara. Kun mada qeequmsa fi diignsa biyyati mirkanessudh. Ethiopian Afaan Oromoo Afaan hojii biyyooleesa akka ta'uu hin barbane diigamuu qabdi. MM. Dr. Abiyi Ahemed oftuluma Amahara kana nu irra hin dhabu tanan rakkon dhufu isaa galafata. Amahara onnee isaan Tigiren dhangalafte Dr. Abiyi onnee itti horaan Bahardar ta'aan Annooleen Haa diigamu, Caafee Oromoo nutu Oggana, Finfinnee kan keenya jeechu egalan kun siiri miti. Nu nafxanyoota wagaa 150 nu garboonfatan of keessa basuu dhiifnan isaan biyya keenya keessa nu basuuf deemu, nu isaan kunnsine waliin jiranan isaan biyya keenya keessatti Adamaatti Buqatoota keenya Hararge dha dhufan nu jala ajjeesun kun siirdha Oromoon jeedhu hin jiru, moo sagalee Oromoo Oggannon Oromoo ilee tuufachu egaltani? ishee kana bachuuf sagoo hin qabnu. Nura dhaba.
Dr.Abiy gaafii ummata Oromoo isaa jijjirama kanaaf bu'uura ta'an waan hunda dursa laate atataman deebi keenu qaba.
1ffaa. Afaan Oromoo afaan hojii biyoollessa akka ta'u,
2ffaa.Finfinneen Oromiyaatti deebite Oromiyaa jala akka bultu,
3ffaa. Mirgii Oromoo gutuuman gutuuti egame Oromoon abba biyyaa akka ta'u,
4ffaa. lafii Oromoo seeran ala samame akka deebi'u,
5ffaa. Qabeenyan Oromoo sirna garboonfatan samaama turef samaama jiru akka deebi'u, kana hojiiti jijjiru utuu qabu kana dhisee gaafii Amahara kan ta'e sirna barnoota Afaan Oromoo ballesuu hojii irra olchuuf yaalun jeequmsa Ethiopia diigu ummudha.
Wa'ee Afaan Oromoo irratti mariin hin jiru Madaa Kafyyaloo Tafaraa kan caaluu Habasha fi Amahareffaan nu madeese jira, of egadha. Kanaafuu wa'ee Afaan Oromoo miciru Ethiopiansi tate Mootummaa jeecha tokko dubanan mootumma qoofa utuu hin tanee diigumsaa biyyatti ariifachiisa. Obsii Oromoo dhumee jira. Badiin kan Oromoo ta'uus beeku qabna, Oganoon gaafi Oromoof deebii kena hin jiran, Qeerroo fi Hayyuleen Oromoo ilee qabsoon waan xumumrame godhan siirbu egalan, habashan garuu afuura dhokfate mirga xiinoo argaten fayyida habasha babalisa jirti.
Oromoon Waan barateen Oromiyaaf dhabbachu qaba, siyaasa bira dhisani hayyuuleen Afaan Oromoo hundi Afaan Oromoo fi Oromummaa tikkisu qabu,
Seera Barnoota jijjiirun mirga ummata Oromoo qoofa! Ijooleen Minilik siirna barnoota Oromoo nu akeeku ykn jijjiru mirga hin qabdu.
Qamni, murni ykn Ethiopian Oromummaa fi Afaan Oromoo irratti yakka fi shira dalagidu jirachu hin qabdu, madaa keenya xuxuuqa jiru kun ammoo diina folacha jiruf kara banee jeequmsa hin xumuramneeti nu gaalcha. Mootummaan Oromiyaa fi MM. Ministera gaafii ummata Oromoo jijjirama kanaaf bu’uua ta’ee utuu deebi hin keeninf waan biraati adeemuun saba Oromoo fi qabsoo qeerroo Oromoo tuufachu dha.
Qeerroon Oromoo fi ummani Oromoo wa'ee gaafi Oromoo ukkamsan feedhi Daqunoota habasha dhugomsuu kana dura dhabbachu qabdu. hayuuleen Oromoo gosa barumsa keessan hundan Oromiyaaf wardiyaa ta’uu qabdu, siyaasaa jeechun waan baratan fi waan beekanin lammi ofifi falmachu dha.